လက်ကား KD-3DVC-6M Full Interface အိတ်ဆောင် 3D 4K Reality Virtual Machine ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
Alibaba တွင် KD-3DVC-6M ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
အလေးချိန် 8 ကီလိုဂရမ်
ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း။ VGA×2၊DVI×2၊HDMI×4၊3G-SDI×4(ring out×4)၊NDI×4၊SRT×4၊ Stream×4
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက် HDMI×2၊SDI×1၊NDI×1၊SRT×1၊PVW အထွက် HDMI×1၊စနစ်များ HDMI×1၊DP×1
အသံထည့်သွင်းခြင်း။ RCA×5၊MIC XLR×5 တွင် စတီရီယို (L၊ R)
အသံထွက် စတီရီယို (L၊ R) OUT RCA×1၊Balanced XLR OUT×2
အခြား interface USB2.0×2၊USB3.0×2၊RJ45×1
ကူးပြောင်းခြင်း။ ကင်မရာ×4၊NDI×4၊SRT×4၊Stream×4၊DDR×4၊Virtual camera×8
အသံရောစပ်ခြင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောကိရိယာ SDI/HDMI×4၊Analog mixer(XLR\_RCA)×5၊ အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲနှောင့်နှေးသည့် ကိရိယာ
မှတ်တမ်း အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယို MPEG2-HL၊MP4
အတု4ချန်နယ် virtual matting စနစ်၊ 3D virtual တစ်ခု
စာတန်း CG-Alpha DVE
PTZ ကင်မရာ Virtual PTZ၊ Camera PTZ
virtual ကိုခြေရာခံရန် ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ virtual စတူဒီယို
စတူဒီယို အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော virtual စတူဒီယို
ဖွဲ့စည်းမှု Intel i9CPU 9900T၊ RAM16G၊ 1TBM.2၊ 4G GPU
1. ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှု- 3G-SDI IN×4၊ HDMI IN×4၊VGA×2၊DVI×2၊NDI IN×4၊SRT×4၊Stream×4၊resolution ပံ့ပိုးမှု 3840×2160၊
2. ဗီဒီယိုအထွက်-PGM အထွက် HDMI×1၊HD/SD-SDI×1၊NDI×1၊SRT×1၊ အသံထွက် 3G-SDI OUT×4၊
3. အသံအဝင်နှင့်အထွက်- မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် အသံလက်ကျန်ထည့်သွင်းမှု XLR IN×5၊ စတီရီယိုထည့်သွင်းမှု RCA(L၊ R) IN×5;SDI4စုံနှင့် HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ် မြှုပ်မထားသော အသံထည့်သွင်းမှု4စုံ၊အသံလက်ကျန်အထွက် XLR OUT×2၊ စတီရီယိုအထွက် RCA(L၊ R) OUT×1;SDI ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် မြှုပ်သွင်းထားသော အသံအထွက် 1 စုံ၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ်2အစုံနှင့် မြှုပ်သွင်းထားသော အသံထွက်ပေါက်၊
4. Mixer- ရောစပ်မွှေစက်၏ အုပ်စု5ခုတွင် ပါ၀င်သော အုပ်စု5ခု၊ အော်ဒီယိုတွန်းတံနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲရွေးချယ်မှုခလုတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် အန်နာလော့အသံရောစပ်ခြင်းကို သိရှိနားလည်ရန်၊ တပ်ဆင်ပါရှိ အသံဟာ့ဒ်ဝဲနှောင့်နှေးသည့်ကိရိယာနှင့် အသံနှောင့်နှေးချိန်ညှိခလုတ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။မိုက်ခရိုဖုန်းရှေ့ အသံချဲ့စက်၊ သာတူညီမျှမှုရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်း၊ switchable 48V phantom power supply ကို ပံ့ပိုးသည်၊
5. စောင့်ကြည့်ရေး မျက်နှာပြင်- 1920×1080 HD မျက်နှာပြင်6ခု၊9လက်မ မျက်နှာပြင် အသီးသီး PGM နှင့် PVW၊44 လက်မ မျက်နှာပြင် အသီးသီး4input အချက်ပြမှုများ၊
6. အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကူးပြောင်းခြင်း စခန်း- built-in 16-channel switching station၊ 16×2 switching button နှင့် T-type damping switching push rod၊ 16-channel အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ switching station တွင် virtual machine ၏ ချန်နယ် 8 လိုင်း၊ ပြင်ပအချက်ပြမှု6လိုင်း၊ ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များ၏ချန်နယ်2ခု (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT၊ VGA၊ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်း);
7. Double rocker arm- တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ သုံးဖက်မြင် ထိန်းချုပ်ရေး rocker သည် PGM နှင့် PVW virtual မှန်ဘီလူး တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့် လွှဲခြင်းကို အသီးသီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ကြီးမားသော rocker လက်မောင်းမှန်ဘီလူး နှစ်ထပ်ကို တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့် လွှဲခြင်းတို့ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မှန်ဘီလူး၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဆင်ပြေသော rocker arm တိကျသောထိန်းချုပ်မှုခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။
8. စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ- i9 9900T CPU၊ 16G မမ်မိုရီ၊ 1TB M.2 ဟာ့ဒ်ဒစ်၊ 4G GPU၊ WIN10 64 ဘစ် လည်ပတ်မှုစနစ်၊ 64 ဘစ် ရယူခြင်း၊ ကုဒ်ဆွဲခြင်း၊ အသံဖမ်းခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ခလုတ်နှိပ်ခြင်း၊ 3D နှင့် အွန်လိုင်း ထုပ်ပိုးမှုစနစ်။ အခြားအရာများ- 1000M RJ45×1၊ USB2.0×1၊ USB3.0×1၊
9. Virtual စတူဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်- လိုင်းလေးခု၏ virtual keying ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
10. အနည်းဆုံး41920×1080 HD ကင်မရာအချက်ပြမှု သို့မဟုတ် အခြားသော HD စက်ပစ္စည်းအချက်ပြထည့်သွင်းမှု၊ ချန်နယ်နှစ်ခုစနစ်၊ ကင်မရာ4လုံးအား တစ်ချိန်တည်းတွင် အထွက်စခရင်တွင်ပြသရန် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊
11. ပရိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကင်မရာမှန်ဘီလူးတစ်ခုစီကို တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လှုပ်ယမ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိရှိရန် ခြေရာခံခြင်းမရှိဘဲ virtual studio နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
12. 3D virtual စတူဒီယိုစနစ်တွင် ပါ၀င်သော အရောင်ခလုတ်များ။
13. မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် မီဒီယာပစ္စည်းဖိုင်များ၏ အသံအတိုးအကျယ်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်သော ပါ၀င်သော virtual mixer၊
14. သော့ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ မတူညီသောသော့ချိတ်သတ်မှတ်ချက်ဆက်တင်များကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာ သိမ်းဆည်းကာခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
15. Three-DimENSIONAL virtual studio သည် ဇာတ်ကောင်များနှင့် မြင်ကွင်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် သုံးဖက်မြင် ဂျစ်စတစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး တွန်းအားနှင့် ဆွဲယူမှု အမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သည်။
16. စနစ်သည် ကင်မရာများ၊ ဗီဒီယိုပလေယာများ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာအများအပြားမှ တိုက်ရိုက်အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းကို တီဗီနံရံတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အသွင်အပြင်ဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
17. virtual မြင်ကွင်းများတွင် virtual ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အစားထိုးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
18. များစွာသော virtual ရိုက်ချက်များကို အစမ်းကြည့်ရှုပါ။
19. ဒေသတွင်း အသံဖမ်းယူနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ hd frame ဖိသိပ်မှု MEPG2 ဗီဒီယိုနှင့် အသံဖိုင်ကို ဒေသတွင်း ရိုက်ကူးမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်၊ အသံဖမ်းသည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် 1920×1080၊ 3840×2160၊ စုဆောင်းမှုဘောင်နှုန်း 25fps၊
20. နောက်ခံအဖြစ် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံဖြင့် 2d သော့ခတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
21. ပံ့ပိုးမှု၊ virtual studio ၏3လမ်းကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်ခု၊ ဥပမာအားဖြင့် host နှစ်ခုရှိ hard switch (သို့မဟုတ် pan) မှအခြား host သို့ hard switch (သို့မဟုတ် pan) သို့ hard switch (သို့မဟုတ် pan) မြင်ကွင်းကျယ်မုဒ် (အိမ်ရှင်နှစ်ခုကို တစ်ချိန်တည်းရိုက်ကူးခြင်း)၊ ကင်မရာမှန်ဘီလူးခလုတ်တစ်ခုသာရှိသော စနစ်သည် ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကင်မရာပြောင်းခြင်းကို သဘောပေါက်ပြီး တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း နှင့် ပြောင်းခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း။ကနဦးစက်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လျှော့ချပါ။
22. နှစ်ထပ် virtual စတူဒီယို၊ သော့ရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့်၊ virtual စတူဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ဆ၊ တူညီသောထည့်သွင်းမှုမှန်ဘီလူး သို့မဟုတ် virtual စတူဒီယို၏အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီအကူးအပြောင်းတွင် မတူညီသောမြင်ကွင်းများရှိ ဇာတ်ကောင်များ၏ မတူညီသောထည့်သွင်းမှုမှန်ဘီလူးနှစ်ခု၊
23.ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ စစ်မှန်သော 3D ပကတိစတူဒီယိုကို ရရှိရန်အတွက် ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ခြေရာခံခြင်းပါရှိသော စတူဒီယို၊
24. TALLY နှင့် နာရီကို လည်ပတ်မှုစာမျက်နှာတွင် ပြသထားသည်။
25. Built-in CG-Alaph စာတန်းထိုးနှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်၊ Alaph တက်ကြွသောစာတန်းထိုး၊ Angle နှင့် လိုဂို၊ 3d အရာဝတ္ထုများနှင့် အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တက်ကြွသောပစ္စည်းများ၊ DVE တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ ဗီဒီယိုပစ္စည်းများနှင့် အခြားနည်းလမ်းများထက် ပိုမိုအောင်မြင်ရန်၊ အမြင်အာရုံ ထုပ်ပိုးမှု တိုက်ရိုက် အစီအစဉ် အပြည့်အစုံ၊
26. 3D အသွင်အပြင်ပုံရိပ်ဒေတာကို ပေးဆောင်ပါ။
27. အနည်းဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် virtual မြင်ကွင်းများ အစုံ 30 ပေးပါ။
28. လုပ်ဆောင်ချက်ကြားခံသည် PVW (အကြို-စောင့်ကြည့်) နှင့် PGM (ပရိုဂရမ်) ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ပံ့ပိုးပေးသည်၊
29. Built-in တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမီဒီယာ၊ ပလပ်အင်များကို ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်နိုင်သည်။
30. အလေးချိန်- 8kg ခန့်၊ အရွယ်အစား- အလျား 440mm၊ အကျယ် 360mm၊ အမြင့် 155mm;
တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း - အင်တာနက်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း (အိမ်ရှင်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်)
1) Web-based တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု သည် ဝဘ်အသုံးပြုသူများကို ဘရောက်ဆာမှတဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။
2) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်း ကွန်ရက်ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းပြီးနောက် စနစ်၏ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
3) unicast နှင့် multicast ကိုပံ့ပိုးပါ၊ multicast ကိုအလိုအလျောက်ရှာပါ၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်သည့်အခါ bandwidth ကိုချွေတာပါ။
4) စနစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်း တစ်ပြိုင်တည်းအရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိသလို လိုအပ်သလောက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်း အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုလည်း ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။၎င်းသည် network segments များနှင့် routes များကိုဖြတ်၍ လက်ခံနိုင်သည်၊ broadband နှင့် wideband ကဲ့သို့သော မတူညီသော bandwidth များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး LAN၊ MAN နှင့် wan တို့၏ applications များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
5) LAN တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးမှုသည် 1 စက္ကန့်ခန့်ဖြစ်သည်။
6) ၎င်းတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုဂို၊ ထောင့်လိုဂိုနှင့် စာတန်းများပါရှိပြီး၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စာတန်းထိုးများနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော စာတန်းထိုးများကို ပံ့ပိုးပေးကာ၊ LAN အတွင်းရှိ အခြားမည်သည့်ကွန်ပျူတာတွင်မဆို စာတန်းထိုးများကို တည်းဖြတ်ပေးကာ စာတန်းထိုးများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် host သို့ ပေးပို့ခြင်း၊
7) စနစ်သည် ထုတ်လွှင့်သည့် မီဒီယာရိုက်ကူးခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် အသံသွင်းခြင်းတို့ကို လွန်စွာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် လွယ်ကူသော MPEG2-HL ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့ အသံသွင်းခြင်း၊
8) စနစ်သည် စံလွှင့်မီဒီယာဖြန့်ချီရေးစနစ်နှင့် FMS ၏ RTMP ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယခင်- KD-C25SRT စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် 8.93 သန်း pixels 3840*2160 resolution 4K PTZ ကင်မရာ
နောက်တစ်ခု: Studio အတွက် KD-BC-8UL 4K ဒါရိုက်တာ Switcher၊ တိုက်ရိုက်၊ အသံသွင်းခလုတ်
KD-3DVC-6N စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့်...